သောမတ်စ် မူလာ . . . . . ဘောလုံး ကမ္ဘာကြီးထဲက Underrated အဖြစ်ဆုံး ဘောလုံးစတား - SPORTS MYANMAR
သောမတ်စ် မူလာ ကို ခင်ဗျားတို့ ဘယ်လို မြင်ကြလဲ . . . သူက တိုက်စစ်မှူး လား ၊ ကွင်းလယ် ဖန်တီးရှင် လား ၊ ဂိုးသွင်းစက်လား ၊ ဘောလုံး ဉာဏ်ကြီးရှင်လား ။ ကျွန်တော် ကတော့ သူ့ကို စွယ်စုံရတဲ့ ရှေ့တန်းလူ ( Versatile Attacker ) လို့ပဲ မြင်ပါတယ် ။ မူလာ က ဂိုးသွင်း နိုင်တယ် ၊ ဂိုးလည်း ဖန်တီး နိုင်တယ် ၊ အဝေးက နေလည်း ကန်တတ်တယ် ၊ ပိတ်သွင်း တာလည်း ရတယ် ၊ ခေါင်းလည်း တိုက်တတ်တယ် ၊ အသင်းဖော် တွေနဲ့ ချိတ်ဆက် ကစားနိုင်ပါတယ် ။
ပြောရရင်တော့ မူလာ ဟာ လီယွန်နယ် မက်ဆီ နဲ့ ခရစ္စတီယာနို ရိုနယ်ဒို တို့မှာ ရှိတဲ့ အရည် အသွေး ကောင်းတွေ ပေါင်းစပ် ထားသူပါ ။ သူ့မှာ မက်ဆီ လို စူးရှ ထက်မြက်တဲ့ ဘောလုံး အမြင် ရှိတယ် ၊ သေသပ် တဲ့ ဖန်တီးမှု တွေ ရှိတယ် ၊ ရိုနယ်ဒို လို သွင်းဂိုးတွေ ၊ ပြင်းပြတဲ့ စိတ်ဓါတ် နဲ့ အနိုင် ရဖို့ အတွက် အစွမ်းကုန် ကြိုးစားချင်တဲ့ ခံယူချက် တွေ ရှိပါတယ် ။
မက်ဆီ ၊ ရိုနယ်ဒို တို့နဲ့ ခြားနား သွားတာက မူလာ ဟာ အဲ့ဒိ ကဏ္ဍတွေ မှာ သူတို့ ၂ ယောက်ကို မကျော် နိုင်ခဲ့ တာပါပဲ ။ ဒါကြောင့် မက်ဆီ – ရိုနယ်ဒို အားပြိုင်တဲ့ ခေတ်မှာ တိမ်မြုပ် ခဲ့ရတဲ့ နောက်ထပ် ကစား သမား ကောင်း တစ်ဦး ဖြစ်ခဲ့ ရတာပါ ။ ဒါပေမယ့် မူလာ ရဲ့ အရေးပါမှု ကိုတော့ လစ်လျှုရှု ထားလို့ မရပါဘူး ။
မူလာ ရဲ့ အကောင်းဆုံး အရည် အသွေးက နေရာလွတ်တွေ ရှာဖွေ တာပါ ။ သူက အရင် တုန်းက တိုက်စစ်မှူး နေရာမှာ ကစားပါတယ် ၊ ဒါပေမယ့် နောက်ပိုင်း မှာတော့ သူနဲ့ ပို လိုက်ဖက်တဲ့ နောက်ချန် တိုက်စစ်မှူး ၊ ကွင်းလယ် တိုက်စစ်သမား နေရာတွေ မှာ အနေများ လာခဲ့ ပါတယ် ။ သူ့ကိုယ်သူ Raumdeuter လို့ အမည်ပေး ထားပါတယ် ။ နေရာလွတ်တွေ ကို ချိုးဖောက်ဝင်ရောက်သူ ပေ့ါ ။
ပွဲပေါင်း 500 မှာ ဂိုး 170 ကျော် သွင်းပြီး ဂိုး 140 ကျော် ဖန်တီး ပေးထားတဲ့ ရှေ့တန်း လူတစ်ယောက် ဟာ သတင်းစာတွေ ၊ မီဒီယာတွေ ၊ ဘောလုံး ကျွမ်းကျင် သုံးသပ် သူတွေရဲ့ ချီးကျုး ပြောဆိုမှု ကို မခံ ခဲ့ရ ပါဘူး ။ အဲ့ဒိလူက သောမတ်စ် မူလာ ပါပဲ ။ ဂျာမန်လိဂ် မှာ ကစား နေတာမို့ ဒီလို မှတ်တမ်းတွေ ရခဲ့တယ် လို့ ပြောချင် ပြောလို့ ရ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် မူလာ ရဲ့ ဥရောပ ပြိုင်ပွဲတွေ ၊ ဂျာမဏီ နဲ့ ကစား ခဲ့တဲ့ လက်ရွေးစင် ပွဲက ခြေစွမ်း နဲ့ စွမ်းဆောင်မှုတွေ ကိုတော့ ငြင်းလို့ မရနိုင် ပါဘူး ။
၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ ဖလား တုန်းက မူလာ ဟာ ပြိုင်ပွဲ ရဲ့ ရွှေဖိနပ်ဆု နဲ့ အကောင်းဆုံး လူငယ် ကစား သမားဆု ကိုရခဲ့ ပါတယ် ။ ဂျာမဏီ ဗိုလ်စွဲတဲ့ ၂၀၁၄ မှာဆိုရင်လည်း ပြိုင်ပွဲရဲ့ ငွေဘောလုံးဆု ကို ရခဲ့တာပါ ။ လူတွေ သတိတောင် မထားမိ ခဲ့ ပါဘူး ။ ၂၀၁၈ တုန်းက ဟယ်ရီကိန်း ရဲ့ ရွှေဖိနပ် ကတော့ နောက်ရာစုနှစ် အထိ ပြောနေ ကြဦး မှာပါပဲ ။
မနှစ်က ဘိုင်ယန် တို့ ဖလား ၃ လုံး အောင်ပွဲ နဲ့ ရာသီ ပိတ်သိမ်းခဲ့ ပါတယ် ။ အားလုံး ရဲ့ အာရုံက ဂိုးတွေ တစ်ဒိုင်းဒိုင်း သွင်းပေး ခဲ့တဲ့ လီဝန်ဒေါ့စကီး အပေါ်မှာပဲ ရှိနေ ခဲ့ကြတာပါ ။ သူ့ရဲ့ နောက်ကွယ်ကနေ ပံ့ပိုး ပေးခဲ့တဲ့ သောမတ်စ် မူလာ ကို မေ့ပစ် ထားကြ ပါတယ် ။ တကယ်တော့ ဘိုင်ယန် ရဲ့ တိုက်စစ် ထက်မြက် ရတာဟာ မူလာ ရဲ့ လုပ်အားတွေ ကြောင့် အများကြီး ပါခဲ့ ပါတယ် ။
ဂျာမန်လိဂ် မှာ တစ်ရာသီ တည်း ဂိုးဖန်တီးမှု ၂၀ ပြည့်ခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါဟာ ဥရောပ ထိပ်သီး လိဂ်တွေ ထဲမှာ ရှားပါး တဲ့ စံချိန်ပါ ။ ဒါကို အခြား လိဂ်တွေ ထက် ၄ ပွဲ လျော့ပြီး မူလာ လုပ်ပြ ခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါတင်မက သေးပါဘူး ၊ အသင်းအတွက် ၈ ဂိုးလည်း သွင်းပေးခဲ့ ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် မနေ့က ကြေညာ တဲ့ UEFA ရဲ့ တစ်နှစ်တာ အကောင်းဆုံး ကစား သမား ဆုရဲ့ စကာတင် စာရင်း မှာတော့ မူလာ ပါမလာခဲ့ ပါဘူး ။ အခုနှစ်ရယ်မှ မဟုတ်ပါဘူး ၊ ဘယ်တုန်း ကမှ မူလာ မပါခဲ့ တာပါ ။ ဘိုင်ယန် ဖလား ၃ လုံး ရတဲ့ ၂၀၁၃ တုန်းကလည်း မပါဘူး ၊ ဂျာမဏီ ကမ္ဘာ့ ဖလား ရတဲ့ ၂၀၁၄ တုန်းကလည်း မပါဘူး ၊ အခုလည်း မပါခဲ့ ပြန်ပါဘူး ။
လီဝန်ဒေ့ါစကီး ကို ဘယ်သူမှ ငြင်းမှာ မဟုတ်ပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် မန်နူရယ် နူအာ နဲ့ ကီဗင် ဒီဘရိုင်း တို့ ကို တော့ သံသယ ဝင်မိပါတယ် ။ ဘိုင်ယန် ရဲ့ အောင်ပွဲမှာ မူလာ က နူအာ ထက် ပိုပြီး အခရာ ကျတယ်လို့ ပြောရင် ငြင်းချင် ပါသလား ၊ ဒါမှ မဟုတ် ကင်မစ်ချ် ၊ ဂနာဘရီ တို့ ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်တွေ ကရော ?
ကီဗင် ဒီဘရိုင်း ဟာ ပရီးမီးယားလိဂ် ရဲ့ အကောင်းဆုံး ကစား သမားပါ ၊ ဒါမှန် ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ဥရောပ မှာတော့ ဘာမှ လုပ်မပြ နိုင်ခဲ့ ပါဘူး ။ မန်စီးတီး ဟာ လိုင်ယွန် လို အသင်းကို ကွာတား ဖိုင်နယ် မှာ ရှုံးပြီး ထွက်ခဲ့ ရတာပါ ။ ဒီစာရင်းမှာ ဒီဘရိုင်း ထက် မူလာ က ပိုပြီး ထိုက်တန်ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် စာရင်းက ကြေညာပြီးသွား ပါပြီ ။ သူတို့ ၃ ယောက် ကိုပဲ မဲပေးရ မှာပါ ။ လီဝန်ဒေါ့စကီး ရမှာ အရှင်းကြီး ပါပဲ ။ သောမတ်စ် မူလာ အတွက်တော့ စိတ်မကောင်း ပါဘူးလို့ပဲ ပြောရမှာပါ ။ ဘောလုံး ကမ္ဘာရဲ့ လျော့အတွက် ခံရဆုံး ဘောလုံး စတား လို့ အမည်ပေးရင် လွန်မယ် မထင်ပါဘူး